Booqashada Taariikhiga Ah ee John Kerry uu Soomaaliya Ku Yimid | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Booqashada Taariikhiga Ah ee John Kerry uu Soomaaliya Ku Yimid
Booqashada Taariikhiga Ah ee John Kerry uu Soomaaliya Ku Yimid
Muqdisho(XT): Xogyaha Arrimaha Dibadda ee dalka Maraykan John Kerry oo safar kadis ah ku yimid magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka baxday duruufihii qallafsanaa ee ay soo martay 25kii sano ee lasoo dhaafay.
Kerry ayay booqashadiisa tahay middii ugu horreysay ee masuul Mareykan ah oo heerkiisa ah uu ku tago Soomaaliya. Ujeedada socdaalkiisa ayuu ku sheegay in uu muujinayo horumarka dhanka nabadda ah ee Soomaaliya laga gaaray iyo sida Mareykanku uu u daneynayo dhawr iyo labaatan sano kadib in uu Soomalaiya gacan siiyo.
Waxa uu ku xusay khudbad uu uga warbixinayo ujeedada socdaalkiisa Soomaaliya in Mareykanku ay taageersanyihiin midnimada Soomaaliya, kuna gacan siin doonaan Soomaalida sidii dhibaatadii ay soo martay ay uga bixi lahaayeen.
Socdaalkiisa ayaa Kerry waxa uu sheegay in uu muujinayo sida ay uga go’antahay Mareykanka in ay Soomaaliya taageeraan. Waxaa kale oo uu ku dhawaaqay in heerkii diblomaasiyadeed ee labada dal uu Mareykanu sare u qaaday oo ay Muqdisho keeni doonaan Diblomaasiyiin heer sare ah.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid, xubno Wasiirro ah oo kamid Xukuuumadda, Madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo masuuliyiin ka socday ururada bulshada rayidka ah ayaa John Kerry kula kulmay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Masuuliyiinta Soomaalida ah iyo Kerry ayaa isdhaafsaday warbixinno ay sal u tahay sidii Soomaaliya ay doorasha uga dhici lahayd 2016 iyo sidii Soomaaliya nabad loogu soo dabbaali lahaa.
Booqashada waxa ay kusoo aaday xilli ay duqeymo ka socdaan dalka Yaman, dagaal sokeeyana uu ka billowday, kumanaan qaxooti Soomaali iyo Yamaniyiin ahna ay usoo qaxeen Soomaaliya. Arrintaas ayaa walwal xooggan laga muujinayaan maadaama xubno ka tirsan ururka Daacish iyo Al Qaacidada Yaman ay kusoo dhex dhuuman karaan dadkan qaxootiga ah.
Waxaa wararku sheegayaan in Mareykanku walaac ka muujinayo amni darrida Yaman in ay uga darto Soomaaliya oo waxii ka dambeeyay 1990kii ahayd meesha ugu badan ee hubka sharci darrada ah uu Soomaaliya kasoo gel jiro iyada oo dowlad leh. Waxaa suura gal ah in ganacsiga hubkaas sharci darrada ah uu sii xoogeysto maadaama aysan haatan Yaman ka jirin dowlad la socon karta qulqulka hubka ee dhanka Soomaaliya soo aadaya.
Mareykanka iyo xulufadiisa Khaliijka iyo dowladaha Geeska Afrika ayaa dhamaantoodba walal ka muujinaya degenaansha la’aanta Yaman iyo Soomaaliya oo xuduud badeed leh. Mareykanka ayaa waxa uu hormuud ka ahaa sanooyinkii ugu dambeeyay sidii Soomaaliya dowladnimadeeda dib loogu yagleeli lahaa.
Previous articleOlolaha Qaad Diid ee Muqdisho oo Galay Usbuucii 4aad Iyo Bulshada oo Si Diirran Usoo Dhaweysay
Next articleSaameynta Dagaalka Yaman uu Soomaaliya Ku Yeelan Karo